लाक्पा खेल्दै काङ्ग्रेस | परिसंवाद
लाक्पा खेल्दै काङ्ग्रेस
गफाष्टक	 शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६ मा प्रकाशित
यसपाला सदनमा लाक्पा (लाप्पा) परो अरे नि अान्तारे तैंले था पाइस् ? “लाक्पा चैं होइन हौ बोजु ! भनाभन चैं भ`को हो । मैले टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइनहरबाट थापाको । … अा…! राजनीति कुरा नगरन बोजु तिर्खा लागि रा`छ एक डबका जाँड छान अनि कुरो गरौंला ।” घाममा धापिएर अा`को अान्तरेले राजनीति कुरा गर्न त्यति रुचाएन ।“कस्तो कुरो गर्छस् हाउ अान्तारे ! हामी बुढाबुढीले पनि के गर्दै छन् हाम्रा नेता भनेर जान्नु परेन”सिउरेको ठाउँबाटछपनी निकाल्दै बोजुले कुरो था पाउने मेसो गरिन ।“सितन के छ बोजु ? मासु पकाए जस्तो वास्ना अाउँदै छ`त !”जे पका`को भा पनि पाई हाल्छस् । हाम्रो नेताहरूले चै केमा झगडा गरेको त्यो भन्न ? बोजुले कर गरेपछि अान्तरे खुलेर बोल्न थाल्यो ।अान्तरेउ वाच — अनि बोजु त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीलेअाक्रोस, कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको उत्तरदिन्न भनेपछि भनाभन भए छ भन्दै थिए तर मलाई भने अोलीले अलि फरक तरिकाले भने जस्तो लाग्यो । बोजु ! अोलीले पनि पेल्ने र हेप्ने गरेकै हो, हाम्राहरुले पनि अलि नबुझेकै हो । अाज विहान युट्युव कि के भन्नेमा मैले अोलीले खासमा के भने भनेर तीनपटकसुने । उनले “उत्तर दिन्न” भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनन् । बरु उनलेे “अाक्रोस, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरू वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्दछु” भनेका रहेछन् ।
हाम्राहर्ले पनि किन छोड्थे । मौकामा चौका त हान्नु पर्छ नि बोजु ! मीन विश्वकर्माले निउ खोजेर कुरो उछाले अनि मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापाहर्ले त्यही कुरोको फेर समातेर कन्दनी चुँडाए । हाम्रो गगन बोल्न चै जान्ने छ है बोजु ! गगन त भन्दै थ्यो — सरकार निरङ्कुश हुदै छ, प्रधानमन्त्री एकलौटी शासन गर्दैछन्, हामी छोड्ने वाला छैनौं ।अा … अान्तारे हाम्रो काङ्ग्रेसले के छोड्नु के समाउनु ! अहिले जागरण कार्यक्रम गर्दै छ । देउवाले एउटा कार्यक्रममा “भ्रष्टाचार जरैदेखि उखेलेर फाल्न सक्ने पार्टी काङ्ग्रेस मात्र हो” भनेछन् । त्यो कुरालाई लिएर काङ्ग्रेसीहरूले नै गिल्ला गरे । देउवा, गच्छदारहरू जस्ताले चाहिँ नभन्दे हुन्थ्यो अरे । नेताहरू उनारु नै हो उनार्ले नभने कस्ले भन्छ ? झन अाफ्नो नेता त्यो पनि सभापति जस्तोले बोलेकोकुरामाढाकछोप गर्नुपर्ने बेलामा गिल्ला पो गरे छ । अनि हाउ अान्तारे ! त्यो देउराली कि चौतारामा के भाको अरे भनभन हौ ? अा …बोजु जागरण अभियान चलाको, काङ्ग्रेसीहारू जागरुक भए छ । एउटा गुटकोले अर्को गुटकोलाईखप्पर फुट्ने गरि बजाए छ । त्यो सिन्धुपाल्चोकको काङ्ग्रेसीहरू तगडा र`छ । “विनाश काले विपरीत बुद्धि” बुझ्यौ बोजु ?
केटार्ले भिडियो कस्तो छिटो खिचेर सप्पै ठाममा पठाई पो हाले छ । न चिमोटेर फाल्न मिल्ने न छोपेर छोपिने हाउ त्यो भिडियो कि सिडिओ त । खै यही पारा हो भने हाम्रो काङ्ग्रेस त चिलिमच्वाँट हुन्छ कि क्या हो बोजु ? के भन्छस् अान्तारे हाम्रो काङ्ग्रेस भनेको उखालेर फ्याँके पनि अर्को ठाउँमा उम्रने झार जस्तो हो ।
अरु पार्टी होचो भयो भने हाम्रो काङ्ग्रेस अग्लो भको देखिन्छ । अब अरुले खुट्टा टेक्नै दिएन भने त कस्को के लाग्छ । लड्छ नि बर्लङ्ग । हाम्रो काङ्ग्रेस कम्निस्टको सरखारलाई सरापेर बसेको छ । त्यो बेकार हो ।अाबो हेर अान्तारे यो सरखारले थोरबहुत बृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलप बढाउँछ । अनि अार्को चुनापसम्ममा थुप्रै कामहरू गर्छ । त्यसपछि फेरि यही वामेहर्ले सजिलै जित्छ । हाम्रो काङ्ग्रेस त छैन भनौ भने छ, छ भनौ भने छैन । हेर्दाहेर्दै बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियारपो भयो काङ्ग्रेस त ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नर्सको आह्वान